Ngosiputa okwu a
(1) Psychology - E si n'okwu abụọ nke "Greek" nweta Psychology - Psycho na Logos. Na Grik, ihe "Psychi" - Mmụọ na Logos - bụ "Sayensị". Ya bu na okwu a “ihe omuma nke nkpuru obi” putara. Nke ahụ bụ, na "asụsụ Grik", anyị mkpụrụ obi na akparamaagwa
Sayensị nke pụtara akparamaagwa
(2) Psychology - akpọrọ okwu "Psychology" n'asụsụ Hindi. Psychology na-ezo aka "sayensị nke uche" ma ọ bụ - "sayensị nke omume uche". Nke ahụ bụ, 'akparamaagwa sayensị bụ sayensị nke uche anyị, ụbụrụ na-achị. Achọpụtala ihe okwu a "akparamaagwa" na-agbanwe ka oge na-aga.
Dị ka -
(3) Site n'oge ruo na narị afọ nke 16 OA - a kpọrọ ya "sayensị nke mkpụrụ obi". Ndị na - akwado ya dị ukwuu - "Socrates, Plato, Aristotle, Ram, Hobbes, wdg.
(4) Site na narị afọ nke 16 ruo na narị afọ nke 17, a kpọrọ ya - "Science nke uche ma ọ bụ ụbụrụ". Nnukwu ndị na - akwado ya - "Thomas, Reid, Locke wdg.
(5) Site na narị afọ nke 17 ruo narị afọ nke 19 - a kpọrọ ya - "Science of Consciousness". Ndị na - akwado ya siri ike - "William James, Tichner, Jameslee - wdg mere.
(6) Site na narị afọ nke 19 rue okwu "ugbu a" - a na - akpọ ya "Science nke Behaviour". Onye na - akwado ya na - akwado "naanị" Watson "mere.
Akwụkwọ nyocha mbụ nke akparamaagwa
Ebe izizi omumu ihe omumu ihe banyere ala ndi West ne “William Wunt” bu onye mbu
Echiche nke akparamaagwa
Dabere na Wilson, "onye ọkà n'akparamàgwà mmadụ" - "Uche dị na" sistem limpic "dị na ụbụrụ.
Ọmụmụ ihe gbasara "Western Psychology" malitere na India n'ihe dị ka iri abụọ (narị afọ nke iri abụọ).
Na ngwa ogu Indian, ihe a na-elebara anya na omumu ihe omuma ya na nnabata ya na omumu ihe omumu. N’ebe eweputara ihe banyere omumu nke uche (uche, ọgụgụ isi, ego, uche na nkpuru obi) wdg N’okpuru nke a, a kọwara omume ahụ n’ime “corpus anọ”. Nke ahụ bụ, e kwusiri ike ya ịghọta omume mmadụ na akụ nke anọ a.
Akụ akụ anọ ndị a bụ
➤ Annamaya Kosha - N’okpuru Anmaya Kosha, a na-amụ “Gyanandris” na “Karma Indras” nke ahụ anyị.
Pranmaya Kosh - N'okpuru "Pranmaya Kosh" na nkà ihe ọmụma India - "A na-amụ ike anụ ahụ" na "Prana Shakti" bụ ndị a gụchara.
(iii) Manumaya Kosh - N'okpuru amamihe nke Indian - a na-amụ "uche" nwata ka a na-atụle "Manumaya Kosh"
(iv) Vigyanamaya Kosh - Dabere na nkà ihe ọmụma ndị India - "Amamihe" nke nwatakịrị ahụ gụnyere n'okpuru "Kig." Vigyan - Maya ".
Nkuzi akuko mmuta
Mara-Psychology bụ ngalaba nke nkà ihe ọmụma - site na nke mbụ ya "William James" kewapụrụ ya.
Dabere na Psychology Indian - Psychology bụ sayensị nke na-echekwa ahụmịhe ndị a nwetara site na "uche mpụga" nke dị na ụbụrụ anyị. N’aka ozo, omuma di otua nke di nchebe n’uche ayi - ọgụgụ isi - ego - nkpuru obi wdg - bu akparamazu. Ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ ma ọ bụ ndị na-eche echiche India akpọwo uche "uche nke isii".
Ọkachamara akparamaagwa - dị ka Fechner si kwuo - “Ọmụmụ banyere akparamaagwa - bụ mmepe nke ụzọ mmụọ.
Dabere na onye ọkà n'akparamàgwà mmadụ Fied na Chugh - "Psychology nwere ọkwa abụọ - nke
Ukwa nke mbu amaghi - ma odi nke abuo - - n’amaghi ama - ya mere - Fried na Chugh - nke a na - akpọkwa nna nke sayensị. "